16 Tena Manamarika Ny Datanao Voalohany Nankany Tsara: Ahoana no Hahafantatra Azo antoka - Fifandraisana
16 Tsara famantarana ny daty voalohany nandeha tsara: ahoana no hahalalana tsara
Efa teo amin'ilay noheverinao fa daty nahafinaritra tokoa, ka manjary misafotofoto sy diso fanantenana rehefa tsy mandeha mankaiza?
Mety ho sarotra ny mamaky ireo famantarana, indrindra amin'izao andro izao izay tena ifantohan'ny olona amin'ny famindrana ireo app mampiaraka sy hifindra amin'ilay olona manaraka!
Ireto misy famantarana 16 tsy misy dikany fa mandeha tsara ny datinao, sao dia mila tanana mamantatra azy ianao…
1. Natoky anao tanteraka izy ireo.
Raha teo amin'ny fotoana izy ireo dia nandeha tsara ny daty - tena mora tokoa izany.
Tsy nibanjina telefaona izy ireo na nanamarina olon-kafa. Nijery anao ny mason'izy ireo ary nilaza mazava izy ireo fa liana amin'izay nolazainao.
Raha tsy dia nisy nanelingelina azy ireo dia nahita fialantsiny izy ireo hialana amin'ny firesahana na ny fifampiresahana be, toy ny firesahana amin'ny olona manodidina anao, ny fiantsoana an-tariby, na ny fitsidihana ny lavidavitra / any ivelany / mankany amin'ny bara hizaha ny anao zava-pisotro sns.
2. Nanadala anao izy ireo.
Azo antoka fa miharihary ity iray ity, saingy mendrika hotadidina! Raha tsara ny vibe ary tsapanao fa nanandrana namely anao izy ireo dia nahomby ilay daty ary azonao antoka tsara fa hitarika any ho any.
3. Noderain'izy ireo ianao.
Averina indray, mety ho toa hadalana ny manonona azy akory, fa maro amintsika no misavoritaka amin'ny daty voalohany ka tsy azontsika atao ny manambatra ireo sanganasa rehetra.
Raha nilaza taminao ny hatsaranao izy ireo, na nidera ny akanjonao, dia satria tian'izy ireo ho fantatrao fa liana aminao izy ireo ary mahita anao manintona .
4. Nametraka fanontaniana be dia be izy ireo.
Raha te hahafantatra anao bebe kokoa ny daty mampiaraka anao dia miharihary fa mitady zavatra matotra kokoa noho ny daty tokana izy ireo.
Mety nanontany ny hevitrao momba ireo zavatra izay manisy olana betsaka amin'izy ireo izy ireo, na nandavaka ny lasa taloha. Raha nanontany momba ny fanantenanao sy ny nofinao izy ireo dia mpiambina izy ireo!
5. Nijanona nisotro zava-pisotro faharoa (na fahatelo!) Ry zareo.
Raha tsy nandeha tsara ny daty, dia azonao atao ny milaza amin'ny hoe tena maniry hiala izy ireo!
Raha nijanona nisotro zava-pisotro iray na roa hafa izy ireo, na nanolo-kevitra ny hisakafo hariva aza dia nankafy ny orinasanao ary te handany fotoana miaraka aminao.
Arakaraka ny naharetan'ny daty sy ny fotoana nanoloran'izy ireo taminao dia tsara kokoa ny daty voalohany.
6. Nisy banter be.
Raha nisy rivo-piainana mahafinaritra ary nandeha tsara ianao dia mazava ho azy fa nahomby ilay daty!
Hisy ny fihomehezana, ny hatsaram-panahy ary ny resaka mahafinaritra. Mety nifampiarahaba mihitsy ianao, nizara tantara mahatsikaiky, na niara-nijery horonan-tsary hadalana. Ny sidina dia nanidina ary samy nahafinaritra anao roa.
7. Ny telefaoninao dia nijanona tao am-paosinao.
Raha tsy niraharaha ny telefaoniny izy ireo ary nitazona anao ny sainy, dia satria te hahalala bebe kokoa momba anao izy ireo ary tian'izy ireo ho fantatrao fa miahy an'izany izy ireo.
Nanao izay ho afany izy ireo mba hanomezana fahatsapana tsara sy haneho anao ny tenany tsara indrindra.
Mety hoe namaly an-tsoratra na naka finday izy ireo, fa aza raisina manokana raha toa ka nahalala izy ireo! Na izany aza, raha tsy nibolisatra an-tariby tamin'ny findainy izy ireo dia tian'izy ireo ianao.
8. Roa ny resaka.
Ny hany zavatra ratsy kokoa noho ny fihainoana olona iray drone momba azy momba anao dia ny fahatsapana fa tsy maintsy mitondra ny resaka iray manontolo ianao.
Mahagaga ny fanaovana ny ezaka rehetra ary afaka mahatsapa fako tena tsara ianao raha toa tsy liana te hiresaka aminao izy ireo!
Raha izany, raha roa ny resaka ary misy fifandanjana tsara ny fihainoana, ny fihomehezana ary ny famaliana / mametraka fanontaniana dia azonao antoka fa mandeha tsara ny fiarahanareo.
9. Nahafantatra bebe kokoa momba ny tsirairay ianareo.
Raha tsapanao fa tena nifankafantatra lalindalina kokoa ianao, dia nalaza ilay daty!
Ny daty voalohany sasany dia mety mahatsapa ho resadresaka asa tsy dia tsara loatra, ka raha nilamina kokoa ny raharaha ary hitanao hoe inona no mahatonga ny tsirairay hifidy, vita tsara - dia nanana daty voalohany tsara ianao.
Tsy mila miala ianao amin'ny fahafantarana ny anarany afovoany sy ny sakaizany indrindra amin'ny fahazazany, fa tokony hanana fahatakarana lalindalina kokoa momba azy ireo sy ny fiainany, ny fialamboly ary ny zavatra mahaliana azy ianao. Toy ny tokony hataony momba anao koa.
10. Tsy nahasakana ny fihomehezana ianao.
Tena mahavariana ve izany rehefa mihaona amin'ny olona iray manana fahatsapana vazivazy toa anao koa ianao?
Raha samy nahafinaritra be ianareo roa, ary nihomehy tamin'ny zavatra iray ihany, dia misy zavatra azo antoka any ary afaka manantena daty faharoa ianao.
Ny fandinihana sasany dia milaza fa ny olona mihomehy amin'ny zavatra mitovy dia hifanaraka amin'ny tantaram-pitiavana, noho izany azo antoka fa zavatra tokony hotadiavina izany!
11. Betsaka ny nifandray tamin'ny maso sy ny fitenin'ny vatana.
Raha nanao fiezahana hihazona ny masonao izy ireo ary nifampiresaka tamina fitenenana misokatra, dia ao aminao izy ireo.
Manalavitra ny fifandraisan'ny maso ny olona raha mahatsapa tsy mahazo aina izy ireo ary matetika hanintona na hanidy ny tenany - manalavitra anao, miampita ny sandriny, na mangeja ny valanoranony / totohondry.
Raha mitazona ny masonao ny sakaizanao, manatrika anao, manondro anao ny tongotr'izy ireo, ary manome taratra ny fiteninao (maka tahaka anao!), Dia ho faly hahita anao indray izy ireo!
12. Nisy fifandraisana ara-batana.
Mety ho madiodio toy ny footsie na lohalika, na zavatra mamy toa ny famihina sy oroka veloma. Na izany na tsy izany dia tsy mirona hikasika olona tsy tiany ny olona fa fahita mahazatra ihany!
Raha nifindra taminao izy ireo na nifaly rehefa niditra hanoroka ianao dia tian'izy ireo ianao ary te-hahita anao indray.
maka andro iray isaky ny mandeha
13. Manolotra daty faharoa ry zareo.
Averina indray fa mora takarina io, saingy fahatsapana mahafinaritra tokoa rehefa misy miteny hoe te hahita anao indray.
Bonus isa raha manome sosokevitra izy ireo any amin'ny toerana sasany izay heverin'izy ireo fa tianao, miorina amin'ny fahalalan'izy ireo anao nandritra ny daty.
Raha manolo-kevitra izy ireo any amin'ny toerana iray manokana dia te-hitondra anao izy ireo, dia nieritreritra momba azy tsara izy ireo ary nanambola mba hahita anao indray.
14. Ela lavitra noho ny noeritreretinao ianao.
Rehefa eo amin'ny daty voalohany tsara ianao dia afaka manidina ny fotoana. Mety hiafara amin'ny fotoana lava be kokoa noho ny noeritreretinao ianao!
Somary cliche ihany izany, saingy mety ho ianao no mpivady farany tao amin'ny trano fisakafoanana rehefa nihidy teo akaikinao ny mpiasa miandry - fantatrao fa tsara rehefa noroahin'izy ireo ianao satria nilentika tanteraka tamin'ny daty nampidirinao fa tsy ' t mahatsapa ny fotoana!
15. Nandefa hafatra ho anao izy ireo avy eo.
Raha mandefa lahatsoratra anao izy ireo hilaza fa nahafinaritra anao ny nihaona taminao, dia mpandresy ianao.
ahoana no fomba ilazana fa misaotra misy heviny
Azon'izy ireo atao fotsiny ny mandingana ny zava-drehetra ary tsy manelingelina ny fifandraisana intsony, ka raha manandrana mifandray izy ireo aorian'ny fahitana anao dia nandeha tokoa ny daty voalohany ary liana ny hahita anao indray izy ireo.
Mety tsy handefa lahatsoratra ao anatin'ny 10 minitra akory izy ireo hanao veloma anao, fa raha nahazo vibe tsara ianao tamin'io daty io, dia mitoria mandritra ny andro vitsivitsy alohan'ny hamoizanao fanantenana - na mandefasa hafatra amin'izy ireo! Mety hahazo valiny mahafinaritra ianao na ho fantatrao ny toerana hijoroanao…
16. Manaraka ny amin'ny daty faharoa izy ireo.
Raha tsy azonao antoka ny hevitr'izy ireo ivelan'ny tanana momba ny fitsangantsanganana indray dia misy dikany, ny lahatsoratra alefan'izy ireo hanaraka amin'ny daty faharoa dia tokony hanazava ny zava-drehetra!
Raha manenjika ny daty faharoa izy ireo, manolora fotoana sy daty hiarahana aminy, na manonona bara iray izay tian'izy ireo hiaraka aminao, fantatrao fa nahomby ilay daty voalohany.
Mbola tsy azonao antoka raha mandeha tsara ny daty, na mila torohevitra fotsiny momba ny fomba hahatongavana any amin'ny sehatry ny fifandraisana? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
Famantarana 12 Misy olona milalao aminao (fa tsy hoe mpinamana fotsiny)
Zavatra 7 Maharitra ny fifandraisana amin'ny maso amin'ny lehilahy mety hidika izany
Fanontaniana 20 hapetraka amin'ny daty voalohany izay tena mahaliana
maninona ny lehilahy no miverina volana maro taty aoriana
ahoana no ilazana raha manana olana amin'ny fanoloran-tena ianao
ny fomba hialana amin'ny fahatsapana ho meloka
manisy sonia tena tia anao ny tovovavy